Tapa-kevitra i Pety Rakotoniaina
Ialan’i Pety Rakotoniaina ny fanontaniana mikasika ny MFM.
Tsy niverin-dalana i Pety Rakotoniaina. Tonga nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-ko fidiana teny amin'ny lapan'ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana ny mpitarika ny fikambanana “Tambatra”, omaly maraina. Toa tsy nisy akony taminy ny fanapahan-kevitry ny antoka MFM izay namolavola sy nanabe azy ara-politika.
Tao anatin'ny lisitry ny olona nanotrona azy dia tsongaina manokana ny fahatongavan'ny vady navelan'i Germain Rakotonirainy izay sekretera jeneralin'ny antoko MFM nandritra ny taona maro. Nambarany tamin'izany fa “nanafatra i Germain Rakotonirainy fahavelony fa i Pety Rakotoniaina no tokony handova ny andraikiny eo anivon'ny antoko MFM.”
“Tsy afa-mihemotra intsony aho mba tsy hahakivy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana Tambatra izay tarihiko sy ireo olona marobe nihaona tamiko nandritra ny fitsidiham-paritra nataoko”, hoy ingahy Pety Rakotoniaina nandritra ny fandalovany teny Ambohidahy. Nanamafy koa ny tenany fa “ireo mpizaika 3800 tonga tany Fianarantsoa no nanapa-kevitra amin'ny filatsahany.”
Tsy hadinon'ny ben'ny tanànan'i Fianarantsoa Pety Rakotoniaina ihany koa ny nitondra fanamarihana momba ny fehin-kevitry ny Vovonana izay notontosain'ny mpikambana sasany ao amin'ny antoko MFM ny faran'ny herinandro teo. “Vondron'olona vitsivitsy no nanapa-kevitra”, hoy izy.
Nanambara anefa izy fa tsy dia tiany hasiana resaka ny raharahan-tokantranon'ny MFM ary notanany ho tsiambaratelony ny toerana misy azy ao anatin'ny antoko MFM. Na eo aza ny olana dia nanamafy hatrany i Pety Rakotoniaina fa tsy mandray an'i Manandafy Rakotonirina ho fahavalo. “Raiamandreny hatrany izy na toy inona ny tsy fitovian-kevitra”, hoy izy.
Raha tsiahivina dia niteraka resabe teo anivon'ny antoko MFM ny firotsahan'ny Pety Rakotoniaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 3 desambra. Nanambara ny sekretera jeneralin'ny antoko, Olivier Rakotovazaha, andro vitsivitsy lasa izay, fa “tsy tokony hanaratsy sy hitsikera ny fombafomba nanomanana ny Vovonana izay mbola te-hijanona ho mpikambana ao amin'ny antoko MFM”.
Ny mpikambana sasantsasany avy any amin'ny faritra Diana sy Vatovavy Fitovinany kosa etsy andaniny dia efa nanome tànana ny kandida Pety Rakotoniaina.
Express de Madagascar: 13-10-2006